UPDATE: Farmaajo oo guuldarro siyaasadeed kala laabtay Garoowe, Ka dib fashilkii… – Puntlandtimes
UPDATE: Farmaajo oo guuldarro siyaasadeed kala laabtay Garoowe, Ka dib fashilkii…
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa goor dhaw ka dhoofay madaarka diyaaradaha ee magaalada Garoowe, isagoo ku sii jeeda caasumada Soomaaliya, ka dib todobo maalmood oo uu kusugnaa Puntland.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku guuldareystay in uu guuleysiyo shirkii uu shirgudoominayey ee kasocday magaalada Garoowe, kaas oo ay lahaayeen madaxda dawlad gobaleedyada iyo dawladda faderaalka ee Soomaaliya.
Kulamadu intii ay socdeen arrimaha sida weyn loo hadal-hayo ee dhacay waxaa kamid ahaa in ay Dawladda Soomaaliya diiday in ay ka tanaasusho mawqifkeeda siyaasadeed iyo aragtiyaheeda ku wajahan sida ay u aragto xalka dalka
Dawlad gobaleedyada Jubbaland & Galmudug oo shalay ka dhoofay Garoowe, waxay sheegeen in talada dalku aysan gacanta ugu jirin Madaxweynihii la doortay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse ay gacanta ugu jirto shaqsiyaad aysan Soomaaliduba aqoon u laheyn.
Dib u laabashada Farmaajo ee Muqdisho ayaa ka dhigan guuldarro siyaasadeed oo ku dhacday, maadaama 7 maalmood oo uu ku sugnaa Garoowe waxba xal ah isagoon wadin dib ugu laabtay caasumada Soomaaliya.
Waxay u egtahay in uusan Ina farmaajo ku soo talo galin in shirkii garoowe lagu xaliyo khilaafyo badan oo ka dhex jirey maamulada gobalada iyo maamul ku sheegiisa itaalka yar.Maadaama uu wato magac madaxweyne waxay ahayd ugu yaraan in uu bal wax isu soo dhaweeyo si loo yiraahdo soomaalidii waxunbay ku heshiisay.Maantase soomaali ceeb baa u wada taal.Sababtoo ah intay shirayeen 9 maalmood baysan waxba ku heshiin.Marka maxaa diidaya in ay run tahay in aysan soomaalida maantu is xukumi karin?